Gwaro reCopac Rokonzera Kupesana muHurumende
Muvhuro, Kukadzi 15, 2016 Local time: 00:59
WASHINGTON— Komiti yeparamende iri kutungamira kunyorwa kwebumbiro idzva remitemo yenyika, yeCopac, inoti yapedza kunyora gwaro rezvakabuda pamusangano wemazuva matatu weSecond All Stakeholders Conference wakaitwa mwedzi wapera.
Komiti iyi inotiwo yasvitsa gwaro iri kukomiti iri kukokera mabasa eCopac.
Asi vane ruzivo nezvaitika mumusangano uyu vanoti paita kusawirirana kukuru pakati peMDC ne Zanu PF pamusoro pekuti gwaro iri rochiendeswepi.
VeZanu PF vanonzi vari kuda kuti gwaro iri ritange raiswa kuvatungamiri vemapato ari muhurumede, ukuwo veMDC vachiti ngaritange raendeswa kuparamende sezvo iri iyo iri kutungamira hurongwa uhwu.
Copac yakapedza kunyora gwaro iri svondo rapera asi zvinonzi komiti iri kukokera mabasa eCopac yakaridzosa ichiti Copac yakanga isina kuisa zvimwe zvezvakaitika pamusangano weAll Stake Holders Conference, izvo zvinonzi zvakakosha.
Asi mumwe wemasachigaro eCopac, VaDouglas Mwonzora veMDC T, vanoti komiti yavo yakanga isina chete kuisa nhoroondo yekunyorwa kwebumbiro remitemo, iyo vaifunga kuti yakanga isina kukosha.